बाँदर आतङक नियन्त्रणको लागी बाँदर हेरालुहरु खटाइयो (२०७४ श्रावण २१, शनिवार)
बाँदरको आतङक बढेपछि अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालीका वडा नं. १२ मा बाँदर आतङक नियन्त्रणको लागी भनि बाँदर हेरालुहरु खटाइएको छ ।
वडामा दैनिक जसो बाँदरले किसानहरुले लगाएको अन्न बाली खाइ दिने , नोक्सान क्षेती तथा गरी दिने हुनाले वडामा वाली संरक्षणको लागी भन्दै हेरालुहरु खटाइएको हो ।
सन्धिखर्क नगरपालीकाद्धारा नगरपालीकाका प्रत्येक वडाहरुमा वाली संरक्षण अभियान नै चलाइएको छ । जस अन्तर्गत वडा नं. १२ मा बाँदरले वडाका गाउँटोलहरुमा आतङक मच्चाउन थालेपछि वडा कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
वडाका झेडी , सल्लिकोट , परालीकर्ख , बस्यालटोला , जिमुरथुम , भद्राचौर , छाप , टाकुरा चुँदालीटोला ,गायत्रीटोल लागायतका गाउँटोलहरुमा बाँदर हेरालुहरु खटाइएको छ । बाँदर हेरालुहरुले गाउँमा बाँदर आएको छ या नआएको भनि सुचना गाउँका अन्य ब्यक्तीहरुलाई दिनेछ र खबर पाए अनुसार सबै जना जम्मा भइ बाँदर नियन्त्रणमा लाग्ने छन् । बाँदर हेरालुको काम गरे वापत हेरालुहरुले प्रति हेरालु १० हजारका दरले तलव पाउने छन् ।
वडामा एक दुई दिनमा २ जना हेरालु थप्ने गरी १० जना हेरालु सङख्या रहने छ । ८ जनाले अहिले बाँदर हेर्ने र खबर पुर्याउने काम गरीरहेका छन् । उनीहरुले डेढ महिना सम्म बाँदर हेर्ने काम गर्नेछन् ।
उता बाँदर नियन्त्रण गर्न हेरालुहरु खटाइएको भन्दै किसानहरुले खुसी ब्यक्त गरेका छन् । किसानहरु विहान उठे देखि साझ सम्म खेतवारीमा बाँदरले क्षेती पुर्याउछ की भनेर बारीमा बस्थे । दैनिक जसो बाँदरले मकै खाइदिने घरमा पसी घर भित्रका सामानहरु ल्यैदिने गरेको थियो ।
समयमै खाना खान नपाइने, घरको अन्य काम गर्न नपाइने , नानी बाबुहरुलाई विद्यालय पठाउन निकै गाह््रो भएको थियो पारालीखर्कका एक किसान कमल पौडेल बताए । बाँदर हेरालु राखे सँगै वडाका गाउँहरुमा बाँदर आए नआएको भन्ने खबर थाहा पाउने र बाँदर नियन्त्रणमा सबै जना सहभागी हुँदा मकै खेति जोगिएको बताएका छन् ।
नगरपालीकाबाट १२ लाख रकम विनियोजित भए सँगै विभिन्न वडाहरुमा वाली संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । प्रत्येक वडाहरुलाई एक एक लाख रकम छ्ट्टयाइएको हो ।
त्यस्तै वडा नं. १२ को जोरीखोला देखि जिमुरथुम सम्म र जिमुरथुम देखि डिभर्ना सम्मका विग्रीएको सडकमा गिट्टी विछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको वडा नं. १२ मा वडा अध्यक्ष नारायण खड्काले जानकारी दिएका छन् ।